Fluoresenan'ny fitsapana kloramphenikol - BALLYA
Fluorescence amin'ny fitsapana Chloramphenicol
Comming sooon! Fitsapana habe 20ppt
Fampianarana ho an'ny fluorescence fitsapana Chloramphenicol
Fanontaniana Trivia: Inona no atao hoe chloramphenicol?
Ny antibiotika Chloramphenicol dia afaka mihetsika amin'ny singa 50S an'ny ribonucleoproteins bakteria ary manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina.
Ny antibiotika Chloramphenicol dia misy ny chloramphenicol, sulfomycin, ary ny chloramphenicol tsy misy fofona.
Sulfomisin: Ity vokatra ity dia methylsulfone derivative of chloramphenicol. Izy io dia zava-mahadomelina mpamono otrikaretina isan-karazany. Ny fihanaky ny bakteria sy ny vokatry ny bakteria dia mitovy amin'ny chloramphenicol. Miparitaka be amin'ny sela bakteria izy io ary mifamatotra amin'ny 50S ribosomin'ny bakteria Ao amin'ny subunit, ny fitomboan'ny rojo peptide dia voasakana (mety hanakana ny vokatry ny transpeptidase), ny fiforonan'ny rojo peptide dia voasakana, ary ny synthesis an'ny sakanana ny proteinina, ary avy eo dia milalao vokarin'ny bakteria.
Chloramphenicol tsy misy fofona: tsy misy tsiro mangidy ny palmitate Chloramphenicol ary mety ho an'ny ankizy am-bava. Chloramphenicol mihena tsikelikely ao amin'ny tsinay rehefa avy naka azy, ka misy vokany maharitra izany. Izy io dia mitovy fampiasana amin'ny chloramphenicol ary ampiasaina amin'ny vava fotsiny.
Bakteria isan-karazany dia mety hiteraka fanoherana ny chloramphenicol. Anisan'izany, E. coli, Shigella, ary Proteus no fahita matetika, ary tsy fahita firy ny typhoid sy Staphylococcus. Ny fanoherana ny bakteria amin'ny chloramphenicol dia somary miadana. Mety ho vokatry ny fiovana miandalana ny fototarazon'ny fanoherana chloramphenicol, saingy mety hanjavona ho azy izy io.
Ahoana no famonoan'ny chloramphenicol bakteria?
Ny Champamphenicol dia mifamatotra amin'ny subunit 50S, manakana ny vokatry ny transpeptidylase, ary manelingelina ny fatoran'ny terminal aminoacyl-tRNA amin'ny subunit 50S, ka manakana ny fananganana rojo peptide vaovao ary manakana ny syntetika proteinina. Satria ny champamphenicol koa dia azo ampifandraisina amin'ny mitochondria 70S olombelona, ​​dia afaka manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina mitochondrial olombelona koa izy ary miteraka poizina amin'ny vatan'olombelona. Satria azo averina ny fatoran'ny chloramphenicol amin'ny ribosome 70S, dia heverina ho antibiotika bakteriaostika izy io, nefa mety hisy fiantraikany amin'ny bakteria ihany koa amin'ny bakteria sasany amin'ny fifangaroan'ny zava-mahadomelina avo, na dia amin'ny fatran'ny gripa gripa mahery aza. Mamokatra vokatra bakteria.
Mitete ny maso Chloramphenicol
Ny tsiranoka Chloramphenicol dia aseho amin'ny fitsaboana areti-maso toy ny trachoma, trachoma, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus ary bakteria mora tohina hafa. Conjunctivitis, keratitis, blepharitis, sns.
Milatsaka ny sofina Chloramphenicol
Ny aretin-tsofina Chloramphenicol dia ampiasaina amin'ny fitsaboana otitis ivelany, haino aman-jery otitis maranitra ary maharitra vokatry ny aretina mikraoba.
1. Typhoid sy hafa Aretina salmonella: ny zava-mahadomelina safidy ho an'ny typhoid sy paratyphoid ateraky ny fihenjanana mafampana, ny gastroenteritis voan'ny Salmonella amin'ny ankapobeny dia tsy mety amin'ity vokatra ity. Raha mafy ny aretina dia mety mbola ampiasaina raha azo atao ny septicemia mitambatra; Amin'ny olon-dehibe voan'ny typhoid sy paratyphoid dia fluoroquinolones no safidy voalohany (tsy mety amin'ny vehivavy bevohoka sy ny zaza).
2. Haemophilus-resistenzae mahazaka ampicillin meningitis type B na Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis meningitis, ary meningite mora miiba gram-ratsy amin'ny marary tsy mahazaka penicillin. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina ho toy ny iray amin'ireo fanafody mifidy.
3. Ny vavony amin'ny ati-doha, indrindra ny otogenika, dia matetika dia fifangaroan'ny bakteria aerobika sy anaerobika.
4. Aretina anaerobika mahery vaika, toy ireo ateraky ny Bacteroides fragilis, dia mety indrindra amin'ireo izay misy fery misy rafi-pitabatabana afovoany. Izy ireo dia azo ampiasaina miaraka amin'ny antibiotika aminoglycoside mba hitsaboana ny aretin-kibo sy ny aretin-koditra mba hifehezana ny otrikaretina bakteria aerobika sy anaerobika.
5. Tsy misy fanafody antibacterial misy poizina ambany hafa azo ampiasaina hitsaboana aretina maro karazana ateraky ny bakteria mora tohina, toy ny sepsis sy ny havokavoka vokatry ny Haemophilus influenzae, Salmonella ary ireo bacilli Gram-négatif hafa, izay matetika miaraka aminoglycosides. Natambatra.
6. Ny aretin'i Rickettsia dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tazo Q, tazo tazo Rocky Mountain ary typhus endemika.
Izy io dia ampiasaina hitsaboana ny conjunctivitis, keratitis, blepharitis, trachoma, sns vokatry ny E. coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Staphylococcus aureus, streptococcus hemolytic ary bakteria hafa saro-pady.
Anaran'ny marika US
Anaran'ny marika kanadiana
8. Vahaolana ophthalmic Pentamycetin 025
9. Vahaolana ophthalmic Pentamycetin 05
Na dia voafetra mafy aza ny fampiasana chloramphenicol amin'ny fitsaboana veterinary, ny chloramphenicol dia manana fampiasana veterinera manan-danja. Ny fiompiana ronono dia iray amin'ireo fampiasana lehibe. Ny olan'ny residu chloramphenicol amin'ny ronono dia lasa matotra be. Ny chloramphenicol fitsapana haingana kit novolavolain'i mahaleo tena Ballya afaka mamaha ny olana toy izany. Ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU, tsy ny fandidiana tsotra ihany, fa ny fotoana fohy sy ny fahitsiana avo lenta. Ballya dia hanao fikarohana lalindalina kokoa amin'ity faritra ity amin'ny ho avy.